အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဖေဖေပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ
25 Responses to “ဖေဖေပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ”
ဘ၀အတွက် သင်ခန်းစာကို ဥပမာလေး တခုနဲ့ နှိုင်းပြသွားတာ ကောင်းလိုက်တာ ချောရေ..။ မိဘတိုင်း သားသမီးတွေကို အခုလို မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းလေးနဲ့ ဆုံးမသွန်သင်တတ်သလို သားသမီးတိုင်းကလည်း လိုက်နာနိုင်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကောင်းမှာပေ့ါ။ ဘာသာပြန်လေးအတွက် လေးစားမိပါတယ်..။
တကယ့်ကို စိတ်အာဟာရပေးတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ ချောရေ...
‘ဖခင်ဝတ’် ကိုဖတ်လိုက်ရသလိုပဲ၊ သမီးကလဲ သားလေး၂ယောက်ကို ပြန်သင်ပေးဘို့ကောင်းတာပေါ့၊
ငါးဆိုတာလည်း မျှားဖူးမှ တကယ်ကို သိရတာ...
စိတ်ကူးနဲ့ ငါးမျှားတောင်မှ တချို့က မမိကြဘူးတဲ့. . . .
ငါးမျှားတာ ဝါသနာ သိပ်မပါပေမယ့် အေးအေးလူလူ ငါးမျှားနေတဲ့သူတွေ တွေ့ရင် တစ်ခါတစ်လေ ငါးမျှားချင်စိတ် ဖြစ်မိတယ်။ ဘဝရဲ့ သင်ခန်းစာနဲ့ တွဲပြသွားတဲ့ ငါးမျှားနည်းလေးကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
ငါးမျှားနည်းသင်ခန်းစာမှသည် ဘ၀အတွက် လေ့လာသင်ယူစရာ သင်ခန်းစာအားလုံးသည် ကျွန်မအတွက်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိနေတုန်း၊ လေးစားစွာ လိုက်နာနေရတုန်းသာ
ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ပါအဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် တန်ဖိုးရှိနေပီး ၊ လေးစားစွာလိုက်နာနေရမှာပါလေ
post ကိုဖတ်ပြိး ဘာမှမေ၇းဘဲပြန်သွား၇တာ တစ်မျိုးဘဲ မချောေ၇...fair လို့ဘဲမှတ်ချက်လေးပေးသွားပါတယ်...
မေတ္တာဟာ သားသမီးတွေအပေါ်မှာအရမ်းမရေးကြီးပါတယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ဘာသာပြန်လေးပါမချောရေ.
စာကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲအစ်မရေ။ ကျွန်မကို အမြဲ အားပေးဆုံးမတတ်တဲ့ ဖေဖေကိုတောင် သတိရမိသွားတယ်။
သင်ခန်းစာပေးထားတာ ကောင်းတယ်အစ်မ ...
အမေ့ကို အရမ်းကိုသတိရနေမိတယ်..။ :(
ချောဆိုတဲ့မိန်းမလှလေးတယောက်ကို ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံဖို့ကျနော်မျိုး ဒူးထောက်တောင်းပန်နေမိပါပြီဗျာ-
ဒါပေမဲ့ ချောကငါးမျှားကောင်းနေလို့ စောင့်နေလိုက်ပါတယ်-
ဘာသာပြန်လေးကိုခံစားသွားပါတယ်အစ်မရေ....ဇတ်လမ်းအဖွဲ့လေးနဲ့ တင်ဆက်ပုံလေးက နှစ်သက်စရာကောင်းလှပါတယ်...ဆက်လက်အားပေးနေပါ့မယ်...ခင်တဲ့(ချိုကျ)
ဒီစာလေးကို ဖတ်ရင်း ၊ မိဘဝတ်ကျေတဲ့ မိဘ ရဲ့ သွန်သင်မှုကို ခံယူရတဲ့ သားသမီး တွေလည်း သားသမီးဝတ်ကျေ စေဖို့ သဘောပေါက်မိတယ် မချောရေ ...
မရှိတော့တဲ့ဖေဖေ့ ကိုလည်း လွမ်းမိတယ်။
စာရေးအားကောင်းတဲ့ မချောကို အားကျမိပါတယ်။
စာလေးဖတ်ရင်း..... ဖေဖေ့ကို သတိရမိသွားပြီဗျာ.........း((
ဖွဲ့နွဲ့ထားတာလေးနဲ့ ပေးထားချက်လေးက အတွေးထဲမှာ ထင်ဟပ်သွားစေတယ်..
ငါးမျှားတာနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဘ၀မှာ နေထိုင်နည်းတွေပါ သင်ပေးသွားတယ်။
ကျေးဇူးပါမမ။ ဘာဘဲပြောပြော အသိပညာတစ်ခုတိုးတာပေါ့။
သမီးဆီလာလည်တာကျေးဇူးပါနော်။ သမီးက စာအရေးအသား မကောင်းလှပါဘူးမမရယ်။ ဒါပေမယ့် မမက ကြံဖန်ချီးကျုးသွားလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။
ငါးမျှားနည်းကတစ်ဆင့် ဘ၀ကို ဘယ်လို ကူးခပ်ဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေးပါ ရသွားပါတယ်။
ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရင် အန္တရာယ်များတယ်၊ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရင် ချောမွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးကို ဖော်ပြပေးတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ခုပါဘဲ။
အဖေ တစ်ယောက်ရဲ့သူ ချစ်တဲ့ သမီးကို
အပြောကျယ်တဲ့ ပင်လယ်ကြီး ထဲ ဘယ်လို ကူး ခတ်ရမယ် ဆိုတာကို လေ။
အတွေး လေး ပါ သွားတယ်
မမရေ...ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်မိတော့ ဖေဖေ့ကို အရမ်းသတိရသွားမိတယ်...စာကောင်းလေးမို့လို့ ကျေးဇူးနော်...
Very Good post ......... I like it ......
ဒီပို့စ် လေး ကို ဖတ်ပြီး ဖေဖေရဲ့ လမ်းညွှန်ပေးမှုတွေနဲ့ ဖေဖေရဲ့ မေတ္တာတရားတွေ ကို သတိရလွမ်းဆွတ်မိ ပါတယ်ဗျာ... ။
မအားလို့ စာတွေ မဖတ်ဖြစ်ဘူးဗျ.. အခုမှ ပဲ ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် မမချော ။